The Women and Girls First Programme focuses on gender equality and women’s empowerment, including access to sexual and reproductive health and rights services, and ending violence against women and girls.
'မျိုးပွားခြင်း၊ သဘာဝနှင့် လူမှုဆိုင်ရာ ဘ၀တွက်တာ သိမှတ်စရာများ' အတွက် နိုင်ငံတကာ နည်းပညာလမ်းညွှန်
အထောက်အထားများမှ အချက်အလက်ရယူထားသည့် ချည်းကပ်ပုံနည်းလမ်း
Violence against women and girls takes many forms of sexual, physical, emotional and economic abuse. One in three women worldwide experience gender-based violence in their lifetime.
အမျိုးသမီးနဲ့ မိန်းကလေးငယ်များအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုစသည့် အသွင်သဏ္ဍန်မျိုးစုံနဲ့ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် အမျိုးသမီး ၃ ဦးလျှင် ၁ ဦးမှာ အကြမ်းဖက်ခံနေရလျှက်ရှိသည်။
Family Planning - Benefits and rights
Family planning gives women the power to make decisions about their bodies and thier lives.
အမျိုးသမီးများ မိမိခန္ဓာကိုယ်နှင့် မိမိဘ၀ကို မိမိကိုယ်တိုင် စီမံဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် သားဆက်ခြားနည်းလမ်းများက စွမ်းဆောင်ပေးပါသည်။
ကျား-မ တန်းတူညီမျှရေးဆိုသည်မှာ အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားများပါ မိမိ ရပိုင်ခွင့်နဲ့ အခွင့်အရေးကို တန်းတူညီမျှ ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ကျား/မ အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုခံစားရသူများအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်
This pocket guidebook provides guidelines and instructions for all humanitarian actors on delivery of gender-based violence services to survivors and information related to referral pathway and other alternative options where GBV services are not available.
In 2017, UNFPA completed its third country programme in Myanmar –aprogramme that was extended to six years to become aligned with the country’s transition and first democratically elected government. The fourth country programme, from 2018 to 2022, will see UNFPA mark 50 years of development, humanitarian and peacebuilding support in Myanmar.